Qorshe meesha looga saarayo Xildhibaanada Ahlu Sunna ku leedahay Baarlamaanka Galmudug oo socda ! | SMC
Home WARARKA MAANTA Qorshe meesha looga saarayo Xildhibaanada Ahlu Sunna ku leedahay Baarlamaanka Galmudug oo...
Qorshe meesha looga saarayo Xildhibaanada Ahlu Sunna ku leedahay Baarlamaanka Galmudug oo socda !
Warar lagu kalsoonaan karo oon helnay ayaa sheegaya in Madaxda sare ee Galmudug ay wadaan qorshe ay ku doonayaan in meesha looga saaro qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug laga siiyay kooxda awoodeeda la wiiqay ee Ahlu Sunna.
Kooxda Ahlu Sunna ayaa Baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug laga siiyay 20-Xildhibaan, hasa ahaatee waxaa kooxdaasi kasoo goostay kana qeyb galay Doorashadii Madaxweynaha Galmudug lagu doortay ilaa 8-Xildhibaan .
Xildhibaanada kale ee kooxda Ahlu sunna laheyd ayaa diiday in ay ka qeyb galena doorashada Madaxweynaha Galmudug iyo kuxigeenkiisa, waxaana doorashada Dhuusomareeb ka dhacday iyada oo banaanka ay ka joogaan 12-kaasi Xildhibaan.
Madaxda Galmudug ayaa hada wada qorshayaal ay ku doonayaan in meesha looga saaro 12-ka Xildhibaan ee Ahlu sunna ka yimid, Xildhibaanadan ayaana ah kuwa aad u mayal adag aadna ugu dhaw Hogaamiyaha Ahlu Sunna Macalin Maxamuud.
Sida aan wararka ku helnay Madaxda Galmudug ayaa doonaya in meesha laga saaro Xildhibaanadan laguna bedelo kuwa cusub ay soo xulayaan Odayaasha beelaha, waxaana wali aysan madaxda Galmudug isla meel dhigin sida ugu macquulsan ee meesha looga saarayo Xildhibaanadaasi iyo waqtiga ay dhaceyso.
Madaxda Galmudug ayaana wali go’aan rasmi ah oo ku aadan sida meesha looga saarayo Xildhibaanada Ahlu sunna isla gaarin, waxa ayna ku balameen madaxda shirtay in mudo kooban arintan hirgalinteeda dib loo dhigo.
Ahlu Sunna ayaa awood badan ku laheyd qeybo kamid ah deegaanada Galmudug, waxa ayna kooxdaasi dowlada federaalka ku qasabtay in 20-Xuldhibaan laga siiyo Baarlamaanka Galmudug , hasa ahaatee awoodii kooxdaasi ayaa si lama filaan ah meesha uga baxday.
Hogaanka Ahlu sunna iyo qaar kamid ah Xildhibaanadii Ahlu sunna ku lahaayeen Baarlamaanka Galmudug ayaa u guuray deeganada Puntland gaar ahaan magaalada Garawe oo hada joogaan.
Previous articleSawiro: Dhalinyarada Deg/ Qansax Dheere Oo Baaq Udireen Wasaarada Dhalinyarada KG.
Next articleDhageyso; Cod Sir ah) Mahad Cawad oo sheegay in uu RW Kheyre yahay qaa’in